Kudutshulwe usomatekisi washona | News24
Kudutshulwe usomatekisi washona
Isithombe : SithunyelweUMnz Jabulani ‘Qobinyoni’ Mbili weboni yamatekisi EGamalakhe.
OBAZIWA ngelika Qobinyoni, uMnu Jabulane Mbili obengunobhala wemboni yamatekisi aseGamalakhe aphinde ahlale isigungwini esiphezulu samatekisi esifundeni udutshulwe washona ngoLwesihlanu olwedlule emzini wakhe okuAbelia Cresent eSouthport.
Okhulumela amaphoyisa uLieutenant-Colonel Zandra Wiid uthe amaphoyisa ase-Southport ngesikhathi ezwa ngesigameko aphuthume khona kodwa amthola esethulile.
“Kusolakala ukuthi uthe umufi epaka ngaphandle kwesango kwakhe ngetekisi kwabakhona umuntu omdubulayo inhlamvu yamshaya ekhanda.
Lo odubulile akaziwa futhi akabonakalanga kodwa icala lokubulala livuliwe nophenyo luyaqhubeka,” kusho uWiid.
Abemboni yamatekisi bathe loludaba lushaqisa kakhulu. yize noma bengenalo ulwazi lokuthi ukufa kwakhe bekumayelana nani. Akukatholakali noma bekuhlangene nombango wasematekisini noma cha.
Usihlalo weGamalakhe Taxi Association uMnz Cornelius Cele uthe kuyethusa kakhulu okwenzekile.
“Engikwaziyo nje ukuthi usuke khona eGamalakhe erenki engumuntu ogodukukayo ngaphambi kokuthi kwenzeke lokhu. Akukho okuningi engingakuphawula kodwa udaba lusemaphoyiseni luyaphenywa,” kusho uCele.
UMnuz Nhlanhla Mzelemu ongusihlalo wenhlangano yamatekisi iSantaco kulesi sifunda uthe uzwe ngeSonto ngesehla- kalo.
“Kungishaqise kakhulu ukuzwa ngaloludaba. Engingakusho ukuthi uma kuhlangene namatekisi, impela lento isiba injwayelo endaweni yaseGamalakhe.
UMbili ngisebenze kakhulu naye njengoba ebengumuntu ebesihlala naye emihlanganweni yamatekisi futhi oseqhubile kulemboni. Isixazululo akukona ukubulala, uma kukhona inkinga kumele ixoxwe kutholwe isixazululo.
Uma ngabe bambulalele umthetho lokho ngeke kubasize ngalutho ngoba bakhona abanye abebambisene nabo abazowuqhuba umthetho.
Engingakusho nje ukuthi asihambisani nokubulawa kwabantu futhi siyacela kubona bonke abemboni ukuthi silwisane nalento,” kusho uMzelemu.
Izinhlelo zomncwabo azikaziwa.